Jean Eric Rakotoarisoa : Nalany ny saron-tavany -
AccueilRaharaham-pirenenaJean Eric Rakotoarisoa : Nalany ny saron-tavany
07/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manova olona ve ny fahefana sa izay vao tena niseho ny nafenina nandritra ny taona maro? Jean Eric Rakotoarisoa, mpampianatra lalàna eny amin’ny oniversite Ankatso, mpanome lesona ny mpanao politika fony mbola tao amin’ny SEFAFI, voatendry ho lehiben’ny HCC nanomboka ny faha-29 oktobra 2014,…
Niezaka nanafina ny momba azy hatrany i Jean Eric Rakotorisoa hatramin’izay nahafantarana azy teo amin’ny sehatry ny raharaham-pirenena: mpanaja lalàna, tsy mitanila, modely, sns. Kinanjo, tao anatin’ny adim-pamantaranandro vitsy monja dia niseho ny tena marina momba ity mpahay lalàna ity. Voatery nanala ny saron-tavany ny filohan’ny HCC, niarovana ny MAPAR sy ny kandidà Andry Rajoelina. Avy amin’ny antoko MAPAR tokoa mantsy ny praiminisitra Ntsay Christian, izay tsy nahavita ny andraikitra nankinina taminy dia ny fanomanana sy ny fikarakarana fifidianana. Porofon’izany ny tsy niantsoany ny mpifidy, 90 andro mialoha, araka ny voalazan’ny lalàna mifehy ny fifidianana. Fa voatery nanala ny saron-tavany i Jean Eric Rakotoarisoa niarovana izany rehefa nametraka fitoriana teny anivon’ny Filankevi-panjakana ny kandidà Tabera Randriamanantsoa.
Fa mbola midoridana tanteraka indray koa ity mpampianatra lalàna ity nandritra sivana natao tamin’ireo kandidà miisa 46. Nolaviny ny filatsahan-kofidin’ireo kandidà 36 satria tsy nahafeno fepetra, kanefa ny kandidà Andry Rajoelina no voalohany tsy mahafeno fepetra indrindra noho ity farany mpanongam-panjakana sazian’ny lalàna iraisam-pirenena (satan’ny SADC, satan’ny Vondrona Afrikana, fifanarahana tany Cotonou, sns), izay madrara tanteraka ny fandraisana anjaran’ny “putschiste”.
Nalan’ny filohan’ny HCC mihitsy ny saron-tavany ho fiarovany an’i Andry Rajoelina, kandidà tohanany amin’ity fifidianana filoham-pirenena ity. Nekeny ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fifidianana, nekeny ny fanitsakitsahana ireo lalàna iraisam-pirenena ary mbola ho ekeny avokoa izay tsy fanarahan-dalàna rehetra ho avy eo mandritra ny propagandy sy ny fotoam-pifidianana. Izany no mpampianatra lalàna ny zanaka malagasy eny amin’ny oniversite, koa mahagaga ve raha izao no niafaran’ny firenena?